Anyị nyochaa igwefoto Xiaomi Yi 4K + na nkọwapụta nke nkụchi obi [VIDEO] | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nyochara igwefoto Xiaomi Yi 4K + na nkọwapụta nke nkụchi obi [VIDEO]
Igwe ese foto ma ọ bụ ese foto egwuregwu Ha bụ ngwaahịa na-achọwanye ọtụtụ ebumnuche, nke ahụ bụ na ọ bụ ezie na a na-ejikarị ha edekọ oge kachasị mma anyị n'egwuregwu egwuregwu, ugbu a anyị hụrụ na nhọrọ ndị ahụ na-enye anyị ohere ịme na-enweghị nnukwu ese foto maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, ọ bụ adịkwaghị obere ndekọ oge njem anyị kachasị mma site na iji otu kamera ndị a.
Anyị nwere igwefoto Xiaomi Yi 4K + nke na-eweta mkpebi 4K na 60 Fps na ngwaahịa nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbochi. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe igwefoto egwuregwu a nwere, gịnị bụ adịghị ike ya, na n'ezie kedu ihe kpatara ya na-ewu ewu.
Dị ka oge niile, na nlele mbụ anyị ga-eleba anya na nkọwapụta teknụzụ na ọnụọgụ ole na ole iji nyere anyị aka inweta echiche banyere ngwaahịa anyị ga-agwọ, mgbe ahụ anyị ga-enyocha akụkụ nke ọ bụla iji mezue ya n'ihi echiche anyị. Lelee Amazon site na euro 322.
1 Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi Yi 4K +
2 Design, ihe na ọdịnaya nke igbe
3 Ndekọ na njide nke Xiaomi Yi 4K +
4 Nka na ụzụ nkọwa na-gaa na akaụntụ na obodo kwụụrụ
5 Njikwa olu, ngwa na ụda ụda stereo
6.1 Kasị njọ
6.3 Nke kacha mma
Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi Yi 4K +
Ndị a bụ njirimara ọrụaka izugbe atụmatụ, ụfọdụ n'ime ha ga-agbatị ka anyị na-eme nyocha ahụ, yabụ anyị na-atụ aro ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anyị ga-agwa ọzọ banyere ngwaahịa a na-atọ ụtọ nke Xiaomi tinye n'aka anyị.
Nlereanya Yi 4K +
Lensị 155º FOV nwere oghere f / 2.8
Ihuenyo Aka njikwa na ihuenyo 2 2 sentimita
Nhazi 2n Ambarella H14
mmetụta Ha bụ 377MP IMX12
Usoro njikwa Ihuenyo mmetụ na ndekọ bọtịnụ tinyere njikwa olu
Video mkpebi Ruo 4k na vidiyo H.264 na mp4 mkpakọ ruo 135 Mbps
Mkpebi foto Ruo 12 MP 4000 x 3000
Esdị Oge Nwepu - Oge Oge - Vidiyo + Foto na Loop
Njikọ WiFi Bluetooth 4.0 na eriri USB-C
Ahịa Site na euro 389
Design, ihe na ọdịnaya nke igbe
Na ọkwa nke imewe na akụrụngwa, Xiaomi achọghị itinye ihe egwu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-emepụta ụdị ngwaahịa a anaghị eme nke a maka ebumnuche doro anya, nkasi obi na ngwa. Anyị dị 65 millimita n'obosara site na 21 millimeters (30 ma ọ bụrụ na anyị gụọ ihe a na-elekwasị anya) na 42 millimita elu. Na azụ anyị na-ahụ 2,2 ″ ihuenyo mmetụ nke ga-ezuru ezu iji jikwaa ngwaọrụ ahụ, ebe n'elu anyị nwere naanị bọtịnụ iji malite ndekọ ma kwụsị ya. N'akụkụ aka ekpe bụ ebe anyị na-ahụ roba nchebe nke, mgbe ewepụrụ ya, na-enye anyị njikọ USB-C. Mgbe na n'ikpeazụ, na mpaghara ala anyị nwere nwanyị ịghasa ka anyị wee nwee ike itinye ya na njem atọ na ngwa ndị ọzọ, yana batrị batrị nke na-enye anyị ohere wepụ ya site na amụma, yana tinye microSD kaadị na a obere oghere.
Lọ nchebe maka mmiri
Eriri USB-C na-akwụ ụgwọ
USB-C ka nkwụnye Minijack maka njide ọdịyo
Ihe ntughari na-eche maka igwefoto dum, ma e wezụga maka ihu, nke nwere akwa plastik siri ike ma na-ebipụta ya na usoro nke obere ebe, ihe na-adọrọ mmasị. N'ihu a, anyị na-ahụ ihe ngosi 4K + nke na-egosi ụdị ahụ, yana akara ngosi nke ndekọ ahụ, ọkụ a dịkwa na bọtịnụ mmalite, mana ebe ọ ga-egosi mpaghara ndị ọzọ dị ka batrị ahụ. Nhazi ahụ dị ntakịrị karịa ka ọ dị na mbụ. Ikekwe ọ dị mkpa iburu n'uche na plastik a "nwere ike ịchọta" nwere ike imetụta eziokwu ahụ na obere ntakịrị nwere ike ịgbawa iko nke kpuchiri ihuenyo ahụ. Anyị nwere ezigbo ụlọ dị mma.
Ndekọ na njide nke Xiaomi Yi 4K +
Anyị nwere ohere ndekọ dị oke obosara mana anyị ga-ahapụ ụfọdụ oghere n'etiti igwefoto a nwere ike ịkwaga, n'ezie nchikota nke ọtụtụ n'ime akụkụ ndị a ga-adabere na igwefoto n'onwe ya, mana n'ụzọ a anyị ga-enwe ike ịme ntakịrị echiche ihe niile a Yi 4K + nwere ike.
Mkpebi: site na 420p ruo 4K Ultra
Fps: Site na 24o na 480p ruo 60 na 4K
Ubi nke Echiche (FOV): Wide, Ultra Wide, na Wide-Medium system system
Mkpebi: site na 848 × 480 ruo 4000 × 3000
Ma igwefoto a, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, nwekwara ike ịnye nsonaazụ ọma mgbe ị na - ewere foto, Iji mee nke a, ọ na-eji ntọala ndị a:
12MP obosara usoro
8 MP obosara usoro
7 MP n'obosara na ọkara usoro
5 MP na usoro ọkara
Maka ihe a niile, ọ na-eji usoro nhazi akwụkwọ ntuziaka nke anyị ga-enwerịrị ihe ọmụma, ma ọ bụghị na ọ dịghị ihe dị mma karịa kpochapụwo akpaka mode "Maka dummies" dị ka onye nyocha ugbu a.
Anyị nwere kọmputa stabilizer nke ga - enyere anyị aka ịme ihe ndekọ na - enweghị ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ gaghị arụ ọrụ ebube na anyị ga - enwerịrị obere nka mgbe ị na - eme atụmatụ, ọ ga - eme ka ogo ọdịnaya dị elu ga - abawanye mgbe anyị na - eme egwuregwu. Maka akụkụ ya, ọkwa agba na nkọwa zuru oke dị mma, N’iburu igwefoto ahụ n’uche, o yighị ka ọ ga-ahụ ọtụtụ nsogbu mgbe anyị chere ya ihu na ọnọdụ ọjọọ dịka ọkụ azụ azụ ma ọ bụ ọkụ na-adịghị mma, sistemụ akpaka ya na-agbachitere onwe ya ọsọ ọsọ na n'ọtụtụ oge ọfụma. Ọ na-atọ ọchị, mana igwefoto a na-enye nsonaazụ dị mma karịa nke ndị ese foto ndị ọzọ na-enye n'otu ọnụahịa ahụ, yabụ sọftụwia na ngwaike na-arụ ọrụ maka imepụta na ọnụahịa ahụ dị egwu.
Nka na ụzụ nkọwa na-gaa na akaụntụ na obodo kwụụrụ
Ihe mbu, obu ezie na nke a ekwesighi inwe obi abua na udi igwe foto a buru n'uche na anyi aghaghi iji kaadi microSD nke 10 di nmaMa ọ bụghị ya, otu igwefoto ahụ ga - egbochi anyị ịme ihe ndekọ mkpebi kachasị, dịka mgbe anyị jiri kaadị nchekwa 16 GB ma ọ bụ obere, ọ nwere mgbagha niile n'ụwa. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na igwefoto a nwere sistemụ nchedo faịlụ nke ga - enyere anyị aka ijikọta mkpirisi dị iche n'etiti 4 GB na 30 GB, nke ga - enyere anyị aka ịghara ịta ahụhụ nke ihe nkiri zuru ezu naanị n'ihi na otu akụkụ emebiwo, nke a na-abịa na okomoko, n'ụzọ nkịtị, iji zere ụjọ mgbe ị na-edozi vidiyo ahụ.
N'aka nke ozo, oburu na anyi choro, anyi aghaghi icheta na anyi nwere USB-C, Ọ bụrụ na anyị ejiri ya maka nchekwa ọdịnaya, ọ ga-enye anyị ọsọ nnyefe nke na-erughị 40 MB / s, nke dị elu karịa nke a na-enye site na ngwaọrụ asọmpi n'otu ọnụahịa ahụ. Na ọkwa nke obodo kwụụrụ onwe anyị Batrị mA 1.400 nke na-enye anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2 awa nke ndekọ na mkpebi 4K, nke dị ntakịrị na-adabere na ọrụ ndị a rụrụ.
Njikwa olu, ngwa na ụda ụda stereo
Maka nsụgharị ndị mbụ mmelite dị mkpa na ọ na-arụ ọrụ naanị na Bekee, agbanyeghị ụdị nke anyị natararịrị emelitere, yabụ, oge eruola ikwu maka usoro nchịkwa olu. Ekwesiri ighota ya ma obughi nani Xiaomi bu ihe na eme ya, dika ima uzo enweela olu. Site na ime ka nhazi a rụọ ọrụ anyị ga-enwe ike ịrụ ọrụ dị mfe na-enweghị imetụ igwefoto ahụ, a na-enwe ekele maka ya mgbe anyị na-eme egwuregwu ma ọ bụ na-eme ọsọ ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịgwa gị ka ịmalite ndekọ vidiyo ma ọ bụ see foto, agbanyeghị, dịka atụ anya ya, ijide igwe okwu dị oke mkpa iji rụọ ọrụ ahụ, na n'ọtụtụ oge, anyị enweghị ike. Maka akụkụ ya, ngwa ahụ bụ ihe ị ga-atụ anya ya, dakọtara na iOS na gam akporo nwere naanị njirimara kwesịrị ekwesị ka ịdekọ, see foto ma jikọọ site na netwọk WiFi igwefoto.
N'aka nke ọzọ, Anyị nwere ihe nkwụnye etinyere n'ime igbe nke ga-enyere anyị aka itinye igwe okwu, na nke a anyị ga-enwe ike ijide ụda na stereo, ọrụ a dị na ekwentị ndị ọzọ dị ka iPhone XS, mana enwere ekele maka ya na ụdị ọdịnaya anyị ga-ejide na igwefoto a. O doro anya na mgbe anyị tinyere ikpe nchekwa na ogo ndekọ ederede (nke na-adịghị njọ n'ozuzu ya) dara n'ụzọ dị egwu, agbanyeghị, anyị nwere ike itinye ụdị igwe okwu ọ bụla site na njikọ USB-C iji nweta nsonaazụ kacha mma, dịka nke a ijide ụda stereo.
Obere ọdịnaya ọkpọ
Oge erugo ikwu banyere igwefoto kacha njọ, ebe anyị na-ebido mgbe niile. Nke mbụ, m ga-achọ igosipụta, ọ bụ ezie na ọ bụghị isi okwu na-adịghị mma ma ọlị, eziokwu ahụ bụ na plastik nke etiti ahụ dị ka ihe dị nro na ihu nke ọ ga-ekwe omume na-emetụta ihuenyo. N'aka nke ya, Xiaomi etinyebeghị ihe ọ bụla n'ihe gbasara ịmebe ihe, nke ahụ na-ahapụ anyị ịnụ ụtọ ọjọọ n'ọnụ anyị mgbe niile. Batrị maka akụkụ ya dịkwa obere karịa nke aha asọmpi, ee, ọnụahịa na-egosi ya nke ọma.
Ihe mmetụta na ndekọ
Ntọala na ihuenyo mmetụ
Ihe kacha masị anyị nke igwefoto bụ eziokwu na ọ nwere njedebe na-enweghị ngwụcha na ntọala ndekọ yana ogo foto. Eriri na ala bụkwa ihe mgbakwunye mgbakwunye iji zere nsogbu na ngwa yana ihuenyo mmetụ anyị hụrụ n'anya, igwefoto a nwere ọtụtụ isi ihe dị mma.
Anyị nyochaa igwefoto Xiaomi Yi 4K +
Na nkenke es otu nhọrọ site na euro 322 na Amazon nke doro anya karịa nke ndị ọzọ na-enye dị ka GoPro maka ihe dị ka euro 120 karịa. Nke ahụ bụ ịsị, Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ njedebe dị elu na uru kachasị mma maka ego na ese foto egwuregwu, m ga-asị na Yi 4K + a doro anya na ọ bụ nke gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Anyị nyochara igwefoto Xiaomi Yi 4K + na nkọwapụta nke nkụchi obi [VIDEO]
Etu esi egbusi oke foto
Analysis ThiEYE Dr.X RC, mmiri nke na-edekọ na 1080P maka € 70